कसरी प्रभावी ढ Online्गले अनलाइन रोजगार खोज्न - व्यक्तिगत विकास क्याफे
कसरी प्रभावकारी अनलाइन रोजगार को लागी हेर्न
पोस्ट व्यवस्थापक | फरवरी 8, 2018 | एक सफल रोजगार खोजी कसरी सञ्चालन गर्ने, रोजगार, जागीरको खोजि |0|
1 कसरी प्रभावी ढ online्गले अनलाइन रोजगार खोज्न
1.1 धैर्य राख्नुहोस् जब तपाईं अनलाइन रोजगार खोज्नुहुन्छ
अनलाइन रोजगार खोज्नको लागि इन्टरनेटको प्रयोग गर्नु सफल रोजगार खोजीको लागि आवश्यक भाग हो। तर केवल अनलाइन रोजगार खोज्नको लागि उत्तम तरिका के हो? तपाईंले कुन साईटहरू भ्रमण गर्नुपर्दछ, के हुन् उत्तम काम खोज इन्जिन, कसरी तपाईं एक अनलाइन काम आवेदन फाराम पूरा गर्नुहुन्छ वा तपाईंको CV / पुनःसुरु अपलोड गर्नुहुन्छ?
तपाईको काम खोजी शुरु गर्न उत्तम तरिका भनेको तपाईले के गर्नु हुँदैछ योजना बनाउनु, जानकारीको अनुसन्धान गर्नु र तपाईले बिताउनु भएको समय रचनात्मक छ भनेर निश्चित गर्नु।
निम्न लेखले केहि मूल्यवान जानकारी समावेश गर्दछ जुन तपाइँको अनलाइन रोजगार खोजीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।
कसरी प्रभावी ढ online्गले अनलाइन रोजगार खोज्न
Son Duong द्वारा
धेरै व्यक्ति जो यी दिनमा रोजगार खोजिरहेका छन् सबै गलत ठाउँमा खोजिरहेका छन्। तपाईको स्थानीय शहर वा शहर वरिपरिको खोजीले तपाईंको रोजगारी पाउने सम्भावनालाई घटाउँछ।
रोजगारीका लागि अनलाइन खोजी गर्दा तपाईलाई परिचित हुन नसक्ने कुरा नहुन सक्छ, तर यो धेरै वर्षदेखि बढ्दो लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। अधिक र अधिक व्यक्ति अनलाईन रोजगार खोज्दा सफलता प्राप्त गर्दै छन्, र यहाँ छ तपाईं कसरी सटीक गर्न सक्नुहुन्छ:
पहिले, तपाइँले के गर्न चाहानुहुन्छ भनेर निर्णय गर्नु पर्छ। यदि तपाईंले भर्खरै तपाईंले पेशागत व्यवसायमा काम गर्नुभयो भने, समान कौशल खोज्नुहोस् जुन तपाईंको कौशल स्तरसँग मेल खान्छ। रोजगार खोज्नका लागि तपाईले अनलाइन गर्न सक्नुहुने पहिलो चीजहरू गुगललाई तपाईलाई मनपर्ने कुरा हो। खोजी परिणामहरू खोजी गरी हेर्नुहोस् र रोजगारको सर्तमा तपाईले के पाउन सक्नुहुनेछ। यदि त्यहाँ कम्पनी छ जुन तपाईंले आवेदन दिन सोच्दै हुनुहुन्छ, यदि उनीहरूसँग वेबसाइट छ भने फेला पार्ने प्रयास गर्नुहोस्। सबै कम्पनीहरूसँग रोजगारका लागि आवेदन दिन क्षेत्रको साथ वेबसाइटहरू हुन्छन्।
अनलाइन रोजगार खोज्नको अर्को तरीका भनेको अनलाइन वर्गीकृत वेबसाइटहरू खोज्नु हो। केहि सब भन्दा सामान्य क्यारियर बिल्डर, दानव, Craigslist, र हट रोजगार हो। केवल एक विशेष पेशामा आफूलाई सीमित नगर्न सावधान रहनुहोस्।
यदि तपाईले रुचि राख्नु भए जस्तै उस्तै राम्रो स्थान पाउन सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई रुचि राखेको व्यक्तिलाई लागू गर्दा तपाईलाई सबैभन्दा धेरै सल्लाह दिइन्छ। तपाइँ निश्चित रूपले प्रत्येक एकल स्थानको लागि आवेदन सबमिट गर्न समय बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न जुन तपाइँलाई रोचक लाग्दछ।
र त्यो जहाँ तपाइँको अनलाइन पुनःसुरु बुझाउने ठाउँमा आउँछ। तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ कि यो गरेर तपाईले धेरै समय र दिक्कको बचत गर्नुभयो। धेरै अवस्थाहरूमा, रोजगारदाताहरूले उनीहरूले खोजिरहेको कौशल र योग्यताको स्तरसँग मिल्दोजुल्दो सजिलैसँग हेराइमा सजिलैसँग झल्काउँदछन्।
यदि तपाइँ अनलाइन पुनःसुरु कसरी सिर्जना गर्ने भनेर जान्नुहुन्न भने, त्यहाँ प्रशस्त संसाधनहरू छन् जुन तपाईंलाई चरण-देखि-चरण मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईको खोजी ईन्जिन बारमा "स्वतन्त्र पुनःसुरु सिर्जनाकर्ता" जस्तो केहि प्रकार टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। दानव र क्यारियर बिल्डर दुबै पनि पुनःसुरु सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। जहिले पनि सबै भन्दा माथि आफ्नो शक्ति हाइलाइट गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
धैर्य राख्नुहोस् जब तपाईं अनलाइन रोजगार खोज्नुहुन्छ
अनलाइन रोजगार खोज्नु केहि समय लिन गइरहेको छ, तर आशा छ, सायद तपाईले सोचे जस्तो हुन सक्दैन। जब सम्म तपाईं सुसंगत हुनुहुन्छ र दैनिक आधारमा अनलाइन क्लासिफाइडहरूको साथ जाँच गर्नुहोस्, तपाईं तोकिएको समयमा काम खोज्न बाध्य हुनुहुन्छ।
तपाईको रोजगारीको खोजीको क्रममा समर्थन प्रणाली हुनु सधैं लाभदायक हुन्छ। साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गर्नुहोस् र उनीहरूलाई भन्नुहोस् तपाइँ के गरिरहनु भएको छ। तपाइँ समर्थनको लागि अनलाइन रोजगार फोरममा सामेल हुनको लागि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कुनै प्रश्न वा सरोकार छन् भने, तपाईं तिनीहरूलाई त्यहाँ पोष्ट गर्न सक्नुहुनेछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि त्यहाँ करोडौं मानिस छन् हाल रोजगार खोज्दै, त्यसैले तपाई पक्कै पनि यसमा एक्लो हुनुहुन्न।
'अनलाइन रोजगारका लागि कसरी हेर्ने' भन्ने बारेमा यस लेखको हो:
कार्य शीर्षक, कुञ्जी शब्द वा कम्पनी
शहर, राज्य वा जिप जब by
माथि उल्लेखित लेखमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू मध्ये एक यो यो सुनिश्चित गर्नु हो कि तपाईंसँग एउटा समर्थन प्रणाली छ जब तपाईं काम खोज्दै हुनुहुन्छ। पत्ता लगाउँदै सम्पर्कहरूको नेटवर्क निर्माण गर्न उत्तम तरिका आवश्यक छ यदि तपाईं एक सफल जॉब सर्च सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने।
सामाजिक मिडिया साइटहरूको लगातार बढ्दो प्रभावले तपाइँको अनलाइन रोजगार खोजीमा कसरी असर गर्छ?
तपाइँले तपाइँको CV / पुन: सुरू अनलाइन सबमिट गर्नुभन्दा पहिले, यसलाई पढ्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि तपाइँ सबै हटाउनुहुन्छ कमजोरीहरू। धेरै व्यक्ति विश्वास गर्छन् 'मेरो CV ठीक छ' र तिनीहरूलाई कुनै विचार बिना पठाउनुहोस्। खराब सीभीले तपाईंको अन्तर्वार्ता पाउने सम्भावनालाई बिगार्न सक्छ, उत्तम CV ले उम्मेदवारहरूको सूची अवश्य देखाउँदछ।
हामी कुनै पनि लेखलाई स्वागत गर्दछौं जसले अरूलाई तिनीहरूको काम खोजीमा सहयोग पुर्‍याउँछ। किन छैन तपाइँको लेख पेश गर्नुहोस् व्यक्तिगत विकास क्याफेमा समावेशको लागि। एक पटक तपाईंको लेख समीक्षा गरियो, हामी यसलाई पोस्ट गर्नेछौं सम्पूर्ण लेखक क्रेडिट।
के तपाइँसँग केहि टिप्पणीहरू छन् वा तपाइँले जवाफ दिन चाहानु भएको तपाइँको अनलाइन रोजगार खोजीको बारेमा प्रश्नहरू छन्? तल दिइएका टिप्पणी फारम प्रयोग गरेर तपाईंको विचारहरू थप्नुहोस्।
पछिल्लोप्यानल साक्षात्कार तिनीहरूलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने
अर्कोCVs मा सबै भन्दा साधारण झूटले तपाइँको क्यारियरलाई हानि पुर्‍याउँछ
कार्य आवेदन पत्र १० उपयोगी पोइन्टहरू
नमूना प्रत्यक्ष क्यारियर कभर पत्र मा
नमूना बिक्री सहायक कभर पत्र
सफल सीभी कभरिंग पत्र गाइड